FIHAONANA :- MINISTRY NY FAMPIANARANA AMBONY sy ny (...)
FIHAONANA :- MINISTRY NY FAMPIANARANA AMBONY sy ny FIKAROHANA ARA-TSIANSA sy ny SENDIKAN’NY PAT (Oniversiten’Antananarivo)
Noraisin’ny tato amin’ny ministera omaly ireo biraon’ny syndicat PAT Antananarivo nanoritsoritana ny dingana efa vita ho famahana olana momba ny karaman’ny PAT sy ny “Indemninité de technicité”.
Nandritra io fotoana io no nanantitrateran’ny minisitra ny Pr ASSOUMACOU Elia Béatrice fa tsy mitazam-potsiny akory ny ministera manoloana ny olana maro misy amin’ireo oniversite rehetra , izay marihana fa misy efa ampolo taonany maro. Tsy mbola nitsahatra nikaroka vahaolana ny ministera manoloana ireo olana maro ireo ary mitondra vahaolana hatrany. Tsapa arak’izany fa efa maro no voavaha saingy mbola betsaka koa anefa ireo olana mampitaraina ny rehetra.
Nampahafantarina ny dingana vita indrindra fa ny fifanantonana tamin’ireo ministera hafa sy ireo misahana ny ara-bola misy eto amintsika. Efa mizotra any amin’ny fahitana vahaolana ny dingana lalovana ankehitriny, efa naravona rahateo ny tsy fitoviam-pijery teo amin’ny Oniversiten’Antananarivo sy ny “Contrôle Financier” amin’ny fomba fikajiana ny karama izay nahatara ny fikarakarana.
Tsy nisalasala tetsy andaniny ireto mpandraharaha ireto naneho ny ahiahiny manoloana ny fitakiana izay nataony. Tao aorian’ny fihaonan’ny roa tonta tamim-pitoniana sy fifanajana dia samy niara-nanaiky fa hiara-mientana sy hifanome tanana ho fifampitsinjovana hatrany hatrany mba hisian’ny fitoniana. Manomboka eto dia afaka mikarakara ny dingana manaraka amin’ny fandefasana ny karama eny amin’ny oniversite ,ny ministera mpiahy azy satria efa narindra ny fijery teo amin’ny Oniversiten’Antananarivo sy ny contrôle financier ho fanajana hatrany ny lalana mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana.